Nepalistudio » अचानक वीरेन्द्रले पेस्तोल झिके शोभाले नखोसेको भए इतिहास बदलिन सक्थ्यो, हत्याकाण्ड १५ मिनेट -भिडियो सहित अचानक वीरेन्द्रले पेस्तोल झिके शोभाले नखोसेको भए इतिहास बदलिन सक्थ्यो, हत्याकाण्ड १५ मिनेट -भिडियो सहित – Nepalistudio
अचानक वीरेन्द्रले पेस्तोल झिके शोभाले नखोसेको भए इतिहास बदलिन सक्थ्यो, हत्याकाण्ड १५ मिनेट -भिडियो सहित
त्रिभुवन सदनस्थित खोपीबाट सैनिक कम्ब्याट लगाएर तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र सोही भवनमै रहेको बिलियार्ड हल छिरे र अन्धाधुन्ध फाइरिङ सुरु गरे ।
सुरुमा सिलिङ र पश्चिम भित्तामा ।
अचानक वीरेन्द्रले पेस्तोल झिके । शोभाले ‘यो छाडिबक्स्योस्’ भन्दै ट्याप्प थुतिन् ।
शोभाको हातमा म्याग्जिन आयो ।
त्यसपछि करिब पौने नौदेखि नौबजेभित्र १५ मिनेटमा दीपेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबारमा जुन वितन्डा मच्चाए, त्यसले बाह्र वर्षअघिको त्यो कालो रातलाई नेपाली इतिहासका सर्वाधिक भयानक दिनमध्ये एक बनाइदिएको छ ।
त्यो दिनको घटना सम्झिँदा अहिले पनि शरीर थरर्र काँप्छ ।
त्यो रात दीपेन्द्रको पहिलो फायरिङपछि नै वीरेन्द्रले हातमा निकालेको पेस्तोल शोभाले नखोसिदिएको भए के हुन्थ्यो ?
होसहवास गुमाएर जथाभावी फाइरिङ गर्दै हिँडेका दीपेन्द्रलाई नै आफूलाई गोली लागिसकेपछि वीरेन्द्रले गोली प्रहार गर्थे वा गर्थेनन् ?
वीरेन्द्रको हातबाट शोभाले म्याग्जिन नथुतिदिएको भए सम्भवतः नेपाली राजतन्त्रको इतिहास नै बदलिन्थ्यो !
साढे सात बजे बोलाइएका शाही नातेदार बिस्तारै आउन थालेका थिए । आमा कोमल, बहिनी प्रेरणा, पत्नी हिमानीसहित पारस ७:४० मा निर्मल निवासबाट नारायणहिटीमा रहेको बिलियार्ड हल आइपुगे । त्यो दिन ज्ञानेन्द्र भने पोखरामा थिए ।
तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्न त्रिभुवन सदन नजिकैको महेन्द्र मञ्जिलमा बस्थिन् । आठ बजे दीपेन्द्र बिलियार्ड हलबाट बाहिर निस्के र आफैं मोटर चलाउँदै महेन्द्र मन्जिलबाट रत्नलाई लिएर त्रिभुवन सदन फर्के ।
रत्न मुख्य जमघटस्थल बिलियार्ड हल पस्दिनथिइन् ।
त्यो दिन पनि उनी अधिराजकुमारी हेलेनसँग आडैको सानो बैठकमा बसिरहिन् ।
बिलियार्ड हल बिस्तारै गुल्जार हुँदै गयो । मातिसकेका दीपेन्द्रले आफैं पाहुनाहरुलाई डि्ंक्स सर्भ गरे ।
यसअघि ८:१२ मा दीपेन्द्रले देवयानीलाई फोन गरेका थिए, १ मिनेट १४ सेकेन्ड । छ मिनेटपछि देवयानीले दीपेन्द्रलाई फोन गरिन् । ४ मिनेट १४ सेकेन्ड कुरा भयो । कुरा भइरहँदा नै दीपेन्द्रको स्वर लर्बराइरहेको थियो । पूरा कुरा हुन पनि पाएन ।
यी चार जना मिलेर दीपेन्द्रलाई उनको खोपीमा पुर्‍याए तर मूल ओछ्यानमा सुताउन सकेनन् । भुइँको सानो ओछ्यानमै दीपेन्द्रलाई सुताइदिएर उनीहरु बिलियार्ड हलमै फर्केर र रमाइलो गर्न थाले।
देवयानीले दीपेन्द्रका पाश्ववर्ती बोहोरा र राजु कार्कीलाई फोन गरेर सोधिन्, ‘युवराजधिराजको स्वर लर्बराइरहेको छ, सञ्चो छैन कि ?’
बोहोराको आदेशअनुसार अर्दली रामकृष्ण र द्वारेआमा जमुना अधिकारी दीपेन्द्रको खोपीमा पुग्दा उनी भुइँमा पल्टेर शरीरको माथिल्लो भागका कपडा खोल्न खोज्दै थिए । रामकृष्ण र जमुनाले उनलाई कपडा खोल्न सघाए । दीपेन्द्र बाथरुम छिरे । जमुनाले उनले वाक्वाक गरेको आवाज सुनिन् ।
अर्दली रामकृष्णलाई लाग्यो, ‘कहिँ बाहिर सवारी हुने रहेछ कि क्या हो !’
उनले दीपेन्द्रलाई सोधे, ‘इमर्जेन्सी ब्याग टक्र्याउँ सरकार ?’
दीपेन्द्रले भने, ‘पर्दैन अहिले ।’
कालो रङको हतियारले हलको सिलिङ र पश्चिम भित्तामा फायरिङ गरे ।
फायर गर्दै पछाडि सरे र कोठाबाहिर भित्री बगैँचा छेउको उत्तरतर्फ झ्याङमा बाह्र बोरको बन्दुक फ्ँयाके र फेरि बिलियार्ड हल छिरे। बत्ती र टेलिस्कोपसहितको अर्को राइफल सोझ्याएर राजा वीरेन्द्र, कुमार गोरखशमशेर, धिरेन्द्र र कुमार खड्गबिक्रमलाई फायर गरे । फेरि पछाडि सरे ।
वीरेन्द्र, ऐश्वर्या, निराजन, श्रुती, शान्ति, शारदा, जयन्ती, कुमार खड्गबिक्रम घटनास्थलमै मारिए । गोली लागेर घाइते भएका दीपेन्द्र र धिरेन्द्रको तीन दिनपछि सैनिक अस्पतालमा निधन भयो।
घटनास्थलमा ५.५६ क्यालिबरको अटोमेटिक राइफलका ४७ वटा गोली भेटिए । मेसिनगन र अटोमेटिक पिस्तोल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो ।
(२०५८ जेठ १९ गतेको घटनासम्बन्धमा तथ्य जाहेर गर्न तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित।)